Dawladda Soomaaliya fariin u dirtay Ganacsatada Soomaalida ee kusugan Kenya, uguna baaqday. – Puntlandtimes
MUQDISHO(P-TIMES)- Shir Jaraa’id oo uu Muqdisho ku qabtay wasiirka Maaliyada ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyleh oo uu kaga hadlayay arrimaha dhaqaalaha, ayuu soo qaaday arrimaha ganacsatada Soomaalida ee kunool dalka Kenya, kuwaas oo dhaqaalo fara badan u xareeya dawladda Kenya oo ay hadda is hayaan Soomaaliya.
Wasiirka ayaa sheegay in looga baahan yahay Ganacsatadu in ay la yimaadaan taxadar dheeraad ah oo ay xooga saaraan, sidii ay u badbaadin lahaayeen Hantidooda, xili ay Kenya dad badan kicinayso lana doonayo in la dhaco Hantidaas.
“Ganacsatada Somalida in ay Canshuur siyaan Dowldda kenya Magalaada Nairobi ay dhismayaal iyo Hanti fara badan ay giliyaan Dowldda kenyana ay ku xad gudubta Siyaasada arimaha dibada Somalia masuura galeyso” ayuu yiri Wasiirka Maaliyadda ee Soomaaliya.
Mr, Beyleh ayaa sheegay in aysan Soomaaliya ogoleyn in lagu xadgudbo siyaasadeeda Arrimaha dibada, Ganacsatada Soomaaliyeed-na aysan sannad kasta Malaayiin Dollar u xareyn Kenya, loona baahan yahay in wax kasta si dhug leh ay u fakaraan.